Wasaarada arrimaha gudaha Punland oo mudaysay wakhtiga doorasahada golaha deegaanka Gaalkacyo – Kalfadhi
Wasaaradda arrimaha gudaha Putland ayaa war ka soo saartay dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo xilliga la qaban doono, golahaas oo la kala diray bishii Nofember ee sanadkii hore.
Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka ayaa lagu faray maamulka gobolka iyo kan KMG ah ee degmada Gaalkacyo in ay isu diyaariyaan dhismaha golaha deegaanka, waxaana wakhtiga doorashada wasaaradu ku mudaysay 25 bisha maarso, 2019.
Qoraalka ayaa sidoo kale duubabka dhaqanka ee degmada lagu faray in ay mudada doorashada ka hor soo dhamaystiraan saxiixyada xubnaha golaha deegaanka.
Sharciga golaha deegaanka Puntland ee xeer Lam. 7 ayaa loo cuskadaa hannaanka xulidda, kala saaridda iyo kan doorashada ee golayaasha deegaanka. Odoyaasha ayaa soo magcaaba xubnaha golaha deegaanka ee degmooyinka maadama awoodda lagu qaybsado nidaamka beelaha.
Madaxweynaha KGS oo maanta ka dalbaday Baarlamaanka inuu u ansixiyo Xukuumaddiisa
Xildhibaan Mahad Dhoorre "Muusiibo ayey aheyd wixii shalay ka dhacay Lafoole, dad maras ah ayaa la-laayay"